ဝေ(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်): သံတူကြောင်းကွဲ ချစ်ခြင်းလင်္ကာ
. 12 January 2012 at 20:11
ဒီစာကို အလွန်တရာ နှစ်သက်မိပါသည်။
အမ်တီအန် 16 January 2012 at 00:17
မိခင်နေရာရောက်မှ တကယ့်ကို ကိုယ့်အလှည့် ပြန်ကြုံရမှာ စိုးနေမိတယ်နော်...။
မေတ္တာဆိုတာ ဆန်ရေမရှိဘူးဆိုတာကို နားလည်ထားပေမယ့် မိဘနဲ့ သားသမီးကြားမှာ အပြန်အလှန် နားလည်မှုရှိတဲ့ ဘ၀မျိုးကိုပဲ တည်ဆောက်ချင်မိတယ်။ အများကြီးမျှော်လင့်မိရင် တစ်နေ့ကျ အများကြီး ခံစားနေမိရမှာ စိုးမိတယ်လေ....။ အတောင်အလက်စုံရင် ပျံသန်းထွက်ခွာ သွားကြတာ သဘာဝပဲဆိုတာ နှလုံးသွင်းထားရတယ်။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! 24 July 2012 at 03:08
တစ်ကယ်ကောင်းတဲ့ ရသစာပေပါပဲ ဆရာမ..
မိဘနေရာ မရောက်သေးတဲ့ သမီးတစ်ယောက်ဆိုတော့..
ဆင်ခြင်တေါးတောမိစရာလေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါလို့...